Musharrax Jebiye oo degmada Waaciye si weyn loogu soo dhoweeyey
November 20, 2018 (WAACIYE) – Degmada Waaciye ee gobolka Karkaar waxaa maanta si diirran loogu soo dhoweeyey musharraxa xilka Madaxwaynaha Puntland ee sannadka 2019, Injineer Maxamuud Khaliif Xasan Jebiye.
Boqollaal dadwayne ah oo isugu jirey qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa isugu soo baxay fagaaraha degmada Waaciye, si ay u muujiyaan taageerada ay u hayaan Musharrax Jebiye iyo ololihiisa Karti iyo Hufnaan.
Injineerku wuxuu bulshada Waaciye uga mahadceliyey sida xurmada leh ee isaga iyo wafdigiisa loo soo dhoweeyey, wuxuuna ballan qaaday in marnaba aanu hilmaami doonin taageerada ay bulshada Waaciye u muujiyeen Ololaha Karti iyo Hufnaan.
Musharrax Jebiye ayaa kahor imaatinkiisa degmada Waaciye wuxuu soo maray si weynna loogu soo dhoweeyey deegaannada Carta, Laas Barwaaqo, Juurile, Dalweyn iyo Alxamdulillaah.
Bulshooyinka deegaannadaas ku dhaqan ayaa Musharraxa uga mahad celiyey sida uu mudnaanta u siiyey codsigooda ah inuu deegaannadooda soo booqdo, iyagoo sheegay inay tahay markii ugu horraysey ee ay arkaan musharrax soo u yimaada oo dhegaysta tabashooyinka ay qabaan.